Carlo Ancelotti: “Weligeey ma arag Ronaldo oo Muraayad isku eegaya” – saad moodid maaha! – Gool FM
Carlo Ancelotti: “Weligeey ma arag Ronaldo oo Muraayad isku eegaya” – saad moodid maaha!
(Madrid) 26 Juunyo 2016 – Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay fikirka qaldan ee dad badani ka aaminsan yihiin xiddigga xulka Portugal iyo kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo taasoo in badani u arkaan xiddig aan sidaasi u sii micno badnayn oo xoogga saara inuu gaaro guulo shaqsi ahaaneed.
Ancelotti oo xilli ciyaareedka 2016-2017 xilka tababarenimo ee Bayern Munich kala wareegi doona Pep Guardiola oo isagana ku sii jeeda Manchester City ayaa waxa uu difaacay Ronaldo, isagoo sheegay inuusan ahayn danayste.
“Waxaad arkeysaa Cristiano Ronaldo ka duwan midka aad caadiga u aragto markaad tababare u noqoto.” ayuu Ancelotti u sheegay ‘The Telegraph’.
“Adduunka intiisa kale waxay arkaan sawirka iyo muuqaalka ninkan, sida uu ugu dabaal dego markuu gool dhaliyo, sida uu dareenka u muujiyo markay wax ka qaldamaan, laakiin anigu waxaan arkay nin mar walba jecel in uu soo bandhigo intii karaankiisa ah.” ayuu sii raaciyay Ancelotti.
Tababare Carlo oo hadalka sii wata ayaa yiri: “Marka hore weligeey hal mar xitaa qolka dhar bedeleshada Real kuma arag Ronaldo oo Muraayad hor taagan oo is eegaya, CR7 hadafkiisu mar walba waa inuu guuleystaa”.
Waxa uu Ancelotti aad ugu hambalyeeyay sida uu Ronaldo u dadaalo taasoo ah midda uu kaga mid noqday xiddigaha ugu fiican taariikhda Kubadda Cagta xilligan, isagoo ku nuux nuuxsaday in uu aad ugu dadaalo jir dhiska iyo Tababarka.
“Waa nin wax badan ka yaqaanna qaabka lagu noqdo xiddig weyn, waxyaabaha ay u baahan tahay ciyaartan casriga ah waa inaad soo kabataa, waana midda loo baahan yahay inaad samayso xilliyada u dhexeeya kulammada ciyaareed; waxa uu Ronaldo mar waliba la hadlaa kooxda caafimaadka Madrid, halkaas oo uu ka ogaado waxyaabaha looga baahan yahay.”
Gebagebadii Ancelotti waxa uu sheegay inuusan jirin xiddig ciyaara kubadda cagta oo 100% mar waliba caafimaad qaba sida Ronaldo oo uu ku tilmaamay mid aan dhaawacyo culusi soo gaarin, taasoo uu ku sheegay inuu iska ilaaliyo dhibaatooyinka nuucaasi ah.
Durba ma khilaaf? Jose Mourinho oo ku jiho wareersan Ed Woodward....Ogow sababta?